प्रभावकारी अनलाइन सर्वेक्षणहरू सिर्जना गर्न १० चरणहरू Martech Zone
प्रभावी अनलाइन सर्वेक्षणहरू सिर्जना गर्न १० चरणहरू
मंगलवार, सेप्टेम्बर 27, 2011 बिहीबार, सेप्टेम्बर 19, 2013
अनलाइन सर्वेक्षण उपकरणहरू जस्तै Zoomerang प्रभावी र प्रभावकारिता स collecting्कलन र डाटा विश्लेषणको लागि उत्कृष्ट हो। राम्रोसँग राखिएको अनलाइन सर्वेक्षणले तपाईंलाई तपाईंको व्यवसायिक निर्णयहरूको लागि कार्यवाहीयोग्य, स्पष्ट जानकारी प्रदान गर्दछ। अगाडि बढि समय खर्च गर्नु र एक ठूलो अनलाइन सर्वेक्षण निर्माण गर्दा तपाईंलाई उच्च प्रतिक्रिया दरहरू, उच्च गुणस्तर डाटा प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईंको उत्तरदाताहरूको लागि पूरा गर्न धेरै सजिलो हुनेछ।
तपाईंलाई मद्दत गर्न यहाँ १० चरणहरू छन् प्रभावकारी सर्वेक्षण सिर्जना गर्नुहोस्, तपाईंको सर्वेक्षणको प्रतिक्रिया दर बढाउनुहोस्, र तपाईंले भेला डाटाको समग्र गुणवत्ता सुधार गर्नुहोस्.
स्पष्ट रूपमा तपाईको सर्वेक्षणको उद्देश्य परिभाषित गर्नुहोस् - राम्रो सर्वेक्षणको ध्यान केन्द्रित उद्देश्यहरु छन् जुन सजीलो नै बुझिन्छ। आफ्नो उद्देश्यहरू पहिचान गर्न अगाडि समय खर्च गर्नुहोस्। अग्रिम योजनाले यो सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ कि सर्वेक्षणले उद्देश्यलाई पूरा गर्न सही प्रश्नहरू सोध्छ र उपयोगी डेटा उत्पन्न गर्दछ।
सर्वेक्षण छोटो र केन्द्रित राख्नुहोस् - छोटो र केन्द्रित दुबै दुबै गुण र प्रतिक्रियाहरूको मात्राको साथ सहयोग गर्दछ। सामान्यतया एक उद्देश्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नु राम्रो हुन्छ मास्टर सर्वेक्षण सिर्जना गर्न प्रयास गर्नु भन्दा धेरै उद्देश्यहरू। जुमेरांग अनुसन्धान (Gallop र अन्य संग) ले देखाएको छ कि एक सर्वेक्षण पूरा हुन minutes मिनेट वा कम लिन सक्दछ। - - १० मिनेट स्वीकार्य छ तर हामी ११ मिनेट पछि हुने महत्त्वपूर्ण त्याग दरहरू देख्छौं।
प्रश्नहरू सरल राख्नुहोस् - निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईका प्रश्नहरू विन्दुमा पुगेको छ र जर्जन, स्लng्ग वा एक्रोनिमको प्रयोगलाई वेवास्ता गर्नुहोस्।
सम्भव भएसम्म बन्द प्रश्नहरूको प्रयोग गर्नुहोस् - बन्द गरिएको सर्वेक्षण प्रश्नहरूले उत्तरदाताहरूलाई विशेष छनौट दिन्छन् (उदाहरण हो हो वा होइन), परिणामहरूको विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउँदछ। बन्द प्रश्नहरू हो / होइन, बहु विकल्प वा रेटिंग मापन को रूप लिन सक्छ।
सर्वेक्षण मार्फत रेटिंग रेटिंग मापन लगातार राख्नुहोस् - मूल्या Rating्कन तराजूहरू भ्यारीएबलको सेट मापन गर्न र तुलना गर्ने उत्तम तरिका हो। यदि तपाईं मूल्या rating्कन तराजूहरू प्रयोग गर्न रोज्नुहुन्छ भने (उदाहरणका लागि १ - from बाट) यसलाई सर्वेक्षणमा एकरूप राख्नुहोस्। मापन मा अंक को एक समान संख्या को उपयोग गर्नुहोस् र सर्वेक्षण मा उच्च र कम रहनु को एक निश्चित अर्थ बनाउनुहोस्। साथै, डेटा विश्लेषण सजिलो बनाउनको लागि तपाईंको मूल्या scale्कन मापनमा एक बिजोर नम्बर प्रयोग गर्नुहोस्।
तार्किक क्रम - निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको सर्वेक्षण एक तार्किक क्रम मा प्रवाह। एक संक्षिप्त परिचयको साथ सुरू गर्नुहोस् जसले सर्वेक्षण लिनेहरूलाई सर्वेक्षण पूरा गर्न प्रेरित गर्दछ (उदाहरणका लागि "हामीलाई तपाईको सेवा सुधार गर्न हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। कृपया निम्न छोटो सर्वेक्षणको उत्तर दिनुहोस्।")। अर्को, यो एक राम्रो विचार हो फराकिलो-आधारित प्रश्नहरूबाट सुरू गरेर र त्यसपछि दायरामा ती संकुचनमा सर्न। अन्तमा, डेमोग्राफिक डेटा स collect्कलन गर्नुहोस् र अन्तमा कुनै पनि संवेदनशील प्रश्नहरू सोध्नुहोस् (जबसम्म तपाईं सर्वेक्षण जानकारी लिने सहभागीहरूलाई जाँच गर्न यो जानकारी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्न)।
प्रि-टेस्ट तपाईंको सर्वेक्षण - निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको लक्षित श्रोताको केही सदस्यहरू र / वा सहकर्मीहरू ग्लिचहरू र अनपेक्षित प्रश्न व्याख्याहरू पत्ता लगाउन तपाइँको सर्वेक्षणको परीक्षण गर्नुहुन्छ।
सर्वेक्षण निमन्त्रणा पठाउँदा तपाईंको समयलाई विचार गर्नुहोस् - भर्खरका तथ्या .्कहरूले सब भन्दा बढी खुला देखाउँछन् र दरहरू मार्फत क्लिक गर्दछ, जुन सोमबार, शुक्रवार र आइतवार हुने गर्दछ। थप रूपमा, हाम्रो अनुसन्धानले सर्वेक्षण प्रतिक्रियाहरूको क्वालिटी साप्ताहिक दिनदेखि लिएर सप्ताहन्तमा भिन्न हुँदैन भनेर देखाउँदछ।
सर्वेक्षण ईमेल रिमाइन्डरहरू पठाउनुहोस् - जबकि सबै सर्वेक्षणहरूको लागि उपयुक्त छैन, उनीहरूलाई अनुस्मारकहरू पठाउँदै जो पहिले प्रतिक्रिया गरेका छैनन् अक्सर प्रतिक्रिया दरहरूमा महत्त्वपूर्ण बृद्धि प्रदान गर्न सक्दछ।
एक प्रोत्साहन प्रस्ताव विचार गर्नुहोस्- सर्वेक्षण र सर्वेक्षण दर्शकको प्रकारमा निर्भर गर्दै, प्रोत्साहन प्रस्ताव सामान्यतया प्रतिक्रिया दरहरू सुधार गर्नमा धेरै प्रभावकारी हुन्छ। व्यक्तिहरू आफ्नो समयको लागि केहि प्राप्त गर्ने विचार मन पराउँछन्। जुमेरांग अनुसन्धानले प्रोत्साहनलाई देखाएको छ औसतमा %०% ले प्रतिक्रिया दर बढावा.
सुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ? का लागि साईन अप गर्नुहोस् निःशुल्क Zoomerang आधारभूत खाता, माथिको चरणहरू लागू गर्नुहोस्, तपाईंको सर्वेक्षण सुरू गर्नुहोस् र वास्तविक समयमा तपाईंको नतीजाहरूको विश्लेषण गर्न तयार हुनुहोस्। रहनुहोस् आगामी पोष्टहरू जहाँ मँ अधिक उन्नत सर्वेक्षण सुविधाहरूमा डुबकी लगाउनेछु साथसाथ तपाइँको समग्र व्यापार रणनीतिमा अनलाइन सर्वेक्षणहरू समावेश गर्ने नवीन तरिकाहरू। शुभ सर्वेक्षण!
के तपाइँ हाल तपाईको व्यवसायको लागि अनलाइन सर्वेक्षणहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईंले यी सल्लाहहरू सहयोगी हुन पाउनुभयो? कृपया तलको टिप्पणी सेक्सनमा कुराकानीमा समावेश हुनुहोस्।
नोभेम्बर,, २०१ at 26::2014 बिहान
त्यस्ता मनमोहक सुझावहरूका लागि धन्यबाद :)